तर पछिल्लो समयमा सरकार विभिन्न प्रकरणमा नराम्रोसँग फस्यो । गुठी प्रकरण, आइफा प्रकरण हुँदै सरकार पछिल्लो समयमा विषादी प्रकरणमा नराम्रोसँग फसेको छ ।
यावत् प्रकरणसँगै पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बन्ध नराम्रोसँग चिसिएको अनुमान राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ ।
विषादी प्रकरणमा पनि पूर्व माओवादी पक्षका मन्त्रीहरूको सक्रियता देखिएको र स्वयं प्रधानमन्त्रीले आफूलाई मन्त्री र सचिवले गुमराहमा राख्न खोजेको अभिव्यक्ति दिए । यसले सरकार सञ्चालनका कतिपय कार्यप्रणाली सहमति र सल्लाहमा नचल्ने गरेको र पार्टीभित्रै नेताबीच एकखालको वैमनस्यता रहेको पुष्टि गरेको छ ।
पार्टी एकताभन्दा पहिला मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन !
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सक्ने भन्दै गत कात्तिकदेखि नै चर्चा चल्न थालेको थियो । नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले पुसमा बस्ने स्थायी कमिटी बैठकले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन सम्बन्धी निर्णय गर्ने भनेर सञ्चारमाध्यममार्फत बहसको उठान गरे । ‘मन्त्रीहरूले सुशासन लगायतका काममा तत्काल परिणाम नदेखाएको पौडेलको त्यतिबेलाको निष्कर्ष थियो तर गत पुसमा सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकमा सरकारको कार्यशैलीको आलोचना भएपनि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनसम्बन्धी कुनै निर्णय गरेन ।
त्यसपछि लगानी सम्मेलनलाई मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको सीमारेखाका रूपमा चर्चा गर्न थालियो । चैत १४ र १५ गते काठमाडौंमा २ दिने लगानी सम्मेलन सम्पन्न भयो तर त्यसपछि पनि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुन सकेन । फागुनमा पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले विराटनगर पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीसँग यसविषयमा छलफल भएको र छिट्टै निष्कर्षमा पुगिने बताएका थिए ।
त्यसपछि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनलाई बजेट कार्यान्वयन हुने सीमासम्म ‘होल्ड’ गरियो । संसदको बजेट अधिवेशनले आव २०७६/७७ को बजेट पारित गरिसकेको छ र कार्यान्वयन हुने चरणमा छ । नेता पौडेलले असार १० गते मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुने घोषणा गरिसकेका छन् । बजेट कार्यान्वयन लगत्तै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुने दाबी पौडेलले रिपोर्टर्स क्लबमा पुगेर गरे ।
मंगलवार बिहान प्रधानमन्त्री ओलीले आकस्मिक रूपमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाए । आकस्मिक बैठकमा कतिपय मन्त्रीहरू फेरिन सक्ने गरी निर्णय हुने आशंका र चर्चा चलेपनि बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले ‘मन्त्री फेर्ने कुरा मन्त्रिपरिषद्मा नहुने’ अभिव्यक्ति दिए । उक्त चर्चामाथि टिप्पणी गर्दै बास्कोटाले पत्रकारहरू ‘कुहिरी मण्डल’ भएको आरोप समेत लगाए । यद्यपि मन्त्री हेरफेर गर्ने काम प्रधानमन्त्रीको निजी मामिला भएकाले जतिबेला, जतिखेर पनि हुन सक्ने भन्दै राजनीतिक वृत्तमा उठेको आशंकालाई थप बल पुर्‍याइदिएका छन् ।
सरकार पछिल्लो समयमा आफ्ना निर्णयका कारण पटक–पटक विवादित बनेपछि प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको बालुवाटार स्रोतले बतायो । ‘सम्भवतः पार्टी एकीकरणका बाँकी काम मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनपछि मात्र सम्पन्न होलान्,’ स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री) लाई कतिपय मन्त्रीहरूको काम मन परेको छैन । यस विषयमा अर्का अध्यक्ष कमरेडसँग निरन्तर छलफल गरिरहनुभएको छ ।’
एकताका काम बाँकी रहँदै पार्टीभित्र महाधिवेशनको माग !
नेकपाका कतिपय नेताहरू अध्यक्षद्वयको पार्टी सञ्चालनको कार्यशैलीको विरुद्धमा उत्रिएका छन् । पार्टी भएको २ अध्यक्ष मात्र नभएको टिप्पणी बारम्बार उठ्ने गरेको छ । नेकपाका केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत टंक कार्कीले पार्टीभित्र संस्थागत व्यवस्था क्रियाशील नभएकाले विभिन्न गतिरोध आइरहेको टिप्पणी गरे ।
‘पार्टी भनेको २ अध्यक्ष मात्र होइन,’ बिहीवार लोकान्तरसँग कुरा गर्दै कार्कीले भने, ‘विधानले सचिवालयको व्यवस्था गरेको छ, स्थायी कमिटी छ, त्यसपछि केन्द्रीय कमिटी छ । पार्टीभित्रका कतिपय निर्णयहरू संस्थागत र सामूहिक हुनुपर्छ । पार्टीले आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउनुपर्छ र नेताहरू गुटको सम्मोहनमा बाँधिनबाट जोगिनुपर्छ ।’
कार्कीले पार्टी एकताताका भएको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘हामीले त्यतिबेला २ वर्षमा महाधिवेशन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थियौं तर समय घर्किसकेको छ । पार्टी एकताका बाँकी कामहरू तत्काल सम्पन्न गरेर शीघ्र केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट निर्णय गराएर महाधिवेशन तयारीतर्फ पार्टी हिँड्नुको विकल्प छैन ।’ कार्कीले सरकारले पार्टी चलाउने प्रवृत्ति हट्नुपर्ने टिप्पणी पनि गरे ।
३ महिनामा सक्ने भनिएको एकताप्रक्रिया १ वर्षमा पनि सम्पन्न नभएको देखेर पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू आजित भएका छन् । नेकपाका अर्का एक केन्द्रीय कमिटी सदस्यले लोकान्तरसँग कुरा गर्दै पार्टीभित्र रहेका विभिन्न विवादको हल महाधिवेशन नै भएको दाबी गरे ।
‘पार्टीका दुवै अध्यक्ष कमरेडहरू तत्काल महाधिवेशनको तयारीमा लाग्नुको विकल्प छैन । पार्टी र सरकार सञ्चालनका क्रममा देखिएका विवादको पनि हल गर्न नसक्ने, एकता पनि गर्न नसक्ने हो भने उहाँहरूले बाँकी काम छोडेर महाधिवेशन तयारीमै लाग्नु श्रेयस्कर हुन्छ,’ उनले भने ।
बाहिर सहमतिको ढोल पिट्ने, भित्र छाती पिट्ने !
गत असार २३ गते बालुवाटारमा राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि दुवै अध्यक्षको सहमति भएको भनी ढोल पिटियो । सहमति लगत्तै सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भोलिपल्ट नै प्रतिवेदन प्रकाशनमा जाने भनी ‘झुट’ बोले तर आजका मितिसम्म प्रतिवेदन प्रकाशित भएको छैन । पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले अझै पनि मिडियाले ‘लिक’ गरिदिएको प्रतिवेदन पढेर चित्त बुझाउन बाध्य छन् ।
तर प्रचण्डले भनेजस्तो २४ गते नै प्रतिवेदन प्रकाशन भएन । स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा अझै पनि कतिपय कुराहरू मिल्न बाँकी छ । प्रतिवेदन प्रकाशनकै कुराले नेकपाका शीर्ष नेताहरू बाहिर सहमति भएको ढोल पिट्ने तर भित्रभित्रै पीर चिन्तामा परिरहने खालको परिदृश्य देखिएको छ ।
नेकपाभित्र विवादकै कारण पोलिटब्यूरो गठन हुन सकेको छैन । पार्टीका विभागहरूमा कसले नेतृत्व गर्ने विषयमा हानथाप चलिरहेको छ । बल्लतल्ल एकीकरण भएका जनवर्गीय संगठन अझै पनि अन्योलमा रहेका छन् । प्रदेश र जिल्ला कमिटीका विवादहरू साम्य भएका छन् ।
शीर्ष नेताले सबै मिलिसकेको भन्दै आफ्ना कार्यकर्तालाई पटक–पटक आश्वस्त पार्न खोजेका भएपनि आन्तरिक शक्ति सन्तुलन, सरकार र पार्टी सञ्चालनका कार्यविधि, कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने लगायतका कतिपय मुद्दाहरू प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयमा भर पर्ने गरेको देखिएको छ । सीमामा आवश्यक पूर्वाधार नभएको भन्दै भारतबाट आयातित विषादीयुक्त तरकारी परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेको नेकपाको सरकार कतै त्यहीँ विषादीको शिकार भएको त होइन ?
विरोध भएपछि व्हाट्सएपमा कर लगाउने निर्णयबाट लेबनानको सरकार फिर्ता काठमाडौँ – विरोध प्रदर्शन भएपछि लेबनान सरकारले व्हाट्सएपमा कर लगाउने आफ्नो निर्णय फिर्ता गरेको छ । आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेको लेबनानको सरकारले बिहीवार म्यासेजिङ एप्लिकेसन व्हाट्सएपमा क...